Manjakandriana : Nanamafy ireo fototra ny HVM Analamanga -
AccueilRaharaham-pirenenaManjakandriana : Nanamafy ireo fototra ny HVM Analamanga
Miainga eny ifotony. Izay no laharam-pahamehan’ny antoko Hery Vaovaon’i Madagasikara eto Analamanga, na ny HVM Analamanga. Araka izany, nidina ifotony tany amin’ny distrikan’i Manjakandriana ny mpandrindra rezionalin’ny HVM Analamanga, Ndranto Rakotonanahary, sy ny ekipany, omaly.
Noho izany indrindra, dia nisy ny dinika niarahan’izy ireo tamin’ireo mpikambana eo anivon’ny HVM ao Manjakandriana. Araka ny fanazavan’ny mpandrindra rezionaly, izany no natao mba entina hanamafisana hatrany ireo fototra ifotoran’ny antoko HVM, indrindra ho an’ny Faritra Analamanga. Izany hoe, hanamafisana ireo mpikambana eny ifotony miainga eny anivon’ireo fokontany sy ny kaominina ary ny distrika.
Tamin’izany ihany koa no namelabelaran’ny mpandrindra rezionaly ny asa mbola miandry ny HVM Analamanga amin’iny taona 2018 iny tamin’ireo mpikambana HVM tao Manjakandriana, izay hiarahan’ny mpikambana rehetra manatratra ny tanjona.
Ankoatra izay, dia natomboka tamin’ny omaly ihany koa ny asa-tanamaro, na Himo ho an’ireo mponina avy amin’ireo fokontany ao Manjakandriana. Ny HVM Manjakandriana no tompon’antoka tamin’ny fanadiovana ny lakandranon’Imady, izay tena mampijaly ireo mponina sy ny mpampiasa iny lalam-pirenena Faharoa iny, na ny RN2. Marihina mantsy fa rehefa vanim-potoan’ny fahavaratra toa izao, dia miakatra hatrany ny rano amin’iny lakandrano iny, ka manototra ny RN2. Tsy vitan’izay fa manimba ireo voly manodidina azy ihany koa, ka mijaly ireo mpamboly. Noho izay indrindra, ny fanadiovana iny Lakandranon’Imady iny no nanavana asa-tanamaro, ka mandritra ny dimy andro eo ho eo no hanatanterahana ny asa fanadiovana. Ireo mponina eo Manjakandriana ihany no nampiasaina tamin’izany, izay manodidina ny 100 isan’andro eo ho eo no ahetsika ary mahazo tambin-karama.
Nambaran’ny mpandrindra rezionaly, Ndranto Rakotonanahary, fa tsy mijanona hatreo akory ny asa sosialy amin’ny filàn’ny vahoaka fa mitohy hatrany.
Ankoatra izay, mitohy hatrany ihany koa ny fanetsehana ireo mpikambana sy ny fanampiana azy ireo, izay miainga eny ifotony, eny amin’ny fokontany tsirairay avy. Hisy, araka izany ny birao mpitantana ny HVM eny anivon’ireo fokontany, sns.